(Nature) ပင်စင်လစာတိုးခြင်း 5July2011 | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » (Nature) ပင်စင်လစာတိုးခြင်း 5July2011
(Nature) ပင်စင်လစာတိုးခြင်း 5July2011
Posted by nature on Jul 5, 2011 in Copy/Paste | 14 comments
မြန်မာပြည်မှာ ပင်စင်လစာ တိုးသွားပြီလို့ ကြားရတဲ့အချိန်မှာ ပင်စင်စားကြီးတွေရဲ့ တဦးနဲ့တဦး ၀မ်းသာအားရ ဖုံးဆက် အကြောင်းကြားတဲ့ အသံလေးတွေ ကြားရတာ အင်မတန်မှ ၀မ်းသာပီတိ ဖြစ်မိပါတယ် ။ လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တာကို သတ္တိရှိရှိ လုပ်လိုက်တဲ့အတွက် ချီကြူးရမှာပါ။ တိုးလိုက်တာဟာလည်း အမည်ခံ တိုးရုံသက်သက် မဟုတ်ပဲ ထိုက်သင့်သော လုံလောက်မျှတသော နှုန်းလို့ မြင်တဲ့အတွက် ဒါဟာ ဒီအစိုးရသစ်လက်ထက်မှာ အင်မတန် ထူးခြားပြီး ဆန်းသစ်တဲ့ ပြောင်းလဲမှုရဲ့ အစလို့ ဆိုရမယ် ထင်ပါတယ် ။
ယခင်လို အထက်မြင် တခုလည်းကို ပုံသေဆွဲကိုင်မထားပဲ အောက်ခြေကတင်ပြတဲ့ အချက်တွေကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားလာတာကိုလည်း ကြိုဆိုပါတယ် ။ပဲ export licene ကို တပတ်အတွင်း အပြီးချပေးတာ ၊ တန်120ကို ပဲရှိကြောင်းပြဖို့မလိုတာ၊ TT credit ကို သဘောင်္ထွက်အောင် မစောင့်ပဲရောင်းလို့ရတာ (ကုန်သည်များအတွက် ငွေလည်ပတ်မှုကိုမြန်စေပြီး အတက်အကျမြန်နေတဲ့ ဒေါ်လာဈေးကိုလည်း ရှောင်ချိန်ရနိုင်ပါတယ်)
တွေဟာလည်း တိုးတက်မှု တခုလို့မြင်ပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်ဆောင်ခြင်းဟာ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ ကို အမြစ်ပြတ် ဖြေရှင်းနိုင်မဲ့ ပထမခြေလှမ်းလို့ မြင်ပါတယ်။
ပင်စင်စားကြီးတွေရဲ့ဘ၀ဟာ အင်မတန် သနားစရာ ကောင်းပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ အရွယ်ကောင်း သန်မြန်ချိန်တွေမှာ နိုင်ငံတော်အတွက် အလုပ်လုပ်ပေးခဲ့ပြီး အသက်ကြီးပြီး အိုမင်းမစွမ်းချိန်မှာ အားကိုးရမဲ့ ပင်စင်လစာလေးကို လုံလုံလောက်လောက် တိုးပေးလိုက်တဲ့အတွက် ပင်စင်စားကြီးတွေနဲ့တကွ ၀န်ထမ်းများ အားလုံးက နိုင်ငံတော်အပေါ်ကို စိတ်ချ ယုံကြည်အားကိုး မှုများ ပိုလာမယ်ဆိုတာ သိသာပါတယ်။ တလက်စတည်း အကြံပေးချင်တာကတော့ မြန်မာငွေမာနေတဲ့ အချိန်မှာ ၀န်ထမ်းလစာများ ကိုပါ အချိန်မဆွဲပဲ တိုးပေးရန် အချိန်ကောင်းဖြစ်ပါကြောင်း ထပ်လောင်းအကြံပေးအပ်ပါသည်။
မြန်မာပြည်သူပြည်သားများကလည်း တိုင်းပြည်တိုးတက်ရေးအတွက် ကောင်းမည့်နည်းလမ်းများကို ၀ိုင်းဝင်း အကြံပေးကြပါရန် တိုက်တွန်းနှိုးဆော်အပ်ပါသည်။
လစာ တိုးရင် ဈေးတွေ တက်တယ် ဆိုတဲ့ ပုံသေနည်းလည်း ရှိတယ်။ ဟိုတလောက လစာတိုးမှာ မိုလို့ ဆိုပြီး အပြင် ရုံးဝန်ထမ်းတွေ လစာ တိုးပေးတာတွေ ရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့ မတိုးပါဘူးလို့ တရားဝင် ကြေညာသွားတယ်။ တကယ်လို့ တိုးခဲ့ရင် နောက်ဆက်တွဲ ဘာဖြစ်နိုင်မလဲ။
ဒီအချိန်မှာမြန်မာငွေတွေမာနေတာ တနိုင်ငံလုံးသိတာပဲ ၊လူတိုင်းတောင်အော်နေကြတာပဲ။ ဒီအချိန်ဟာ လစာတိုးဘို့ အချိန်ကောင်းပါပဲ။ ယခင်လို ကုန်ဈေးနှုန်းတွေ တအားတက်မသွားနိုင်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်။
ပင်စင်လစာတိုးတာကတော့ အရမ်းဝမ်းသာစရာကောင်းပါတယ် … စိတ်ဓါတ်ကျနေတဲ့ ပင်စင်စားတွေ အရမ်းပျော်သွားကြတာ တွေ့ရပါတယ် …
ဒီရက်ပိုင်း တွင်း ကြားလိုက်ရတဲ့ သတင်းကောင်းလေး တခုပါ.. ၀မ်းသာပါတယ်…
လစာ တိုးတယ်ဆိုတာ..နိုင်ငံရေးဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲမှုနဲ့ ယှဉ်တွဲနေသမျှ…အဆင်ပြေလဲခနပါဘဲ။
မြန်မာငွေ က တစ်ခြမ်းမာ ပြီး တခြမ်းပျော့နေပါတယ်
ပြည်ပငွေနဲ့ လဲလှယ်သုံးရင် ပြည်ပငွေ ပိုရမယ် မြန်မာငွေမာတယ်
ပြည်တွင်းမှာတော့ ဆန်တပြည်ဈေးနှုန်း၊ကုန်ဈေးနှုန်းတွေက ကျသွားတာ မရှိတော့ မြန်မာငွေမာတယ်လို့ပြောလို့မရပါဘူး
တကယ်ဆို ပြည်ပကသွင်းလာတဲ့ ပစ္စည်းတွေ ဈေးကျရမှာ IT ပစ္စည်းမျိုးကလွဲလို့ တခြားဟာတွေ ဈေးမကျပါဘူး သူ့အကြောင်းနဲ့သူတော့ ရှိမှာပါ
ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ၀န်ထမ်းတွေ လစာတိုးဘို့ကိုတော့ ထောက်ခံပါတယ်
ပင်စင်လခတွေ ထိုက်သင့်တဲ့နှုန်းတိုးတာ ၀မ်းသာပါတယ်။ တိုင်းသူပြည်သားတွေ ရသင့်ရထိုက်တဲ့ အခွင့်အရေး မှန်မှန်ကန်ကန်ရဖို့ ဆောင်ရွက်တာဟာ အစိုးရတိုင်းရဲ့တာဝန်ပါ။ တစ်ဖက်ကလည်း အခွန်တွေ အဆမတန် တိုးမကောက်ဖို့လိုပါတယ်။ မကြာသေးခင်ကဘဲ သွင်းကုန်လုပ်ငန်းမှာ ပင်ရင်းမှဖြတ်တောက်အခွန် (၃.၅%) အသစ်ထပ်ကောက်ပါတယ်။ မကောက်သင့်တဲ့ ပို့ကုန်အခွန်လို အခွန်တွေကို ဖျက်သိမ်းခြင်း (သို့) အနည်းဆုံးလျှော့ချခြင်းတွေ ပြုလုပ်သင့်ပါတယ်။ ဒါမှ တိုင်းပြည်ရဲ့ လူများစု လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး တောင်သူလယ်သမားများနဲ့ ပို့ကုန်ထုတ်လုပ်တဲ့သူတွေ အသက်ရှူချောင်မှာပါ…။
ပင်စင်လစာ တိုးတာကြောင့် အရင်က ပင်စင်ရောင်းစားထားတဲ့ လူတွေတော့ စုပ်တသတ်သတ်နဲ့ နှမျောနေကြပါပြီ ။ ဒါနဲ့export license က တပတ်နဲ့ အပြီး ချပေးနေပြီလား …အရင်က အဲ့ဒီဟာကို စောင့်ရတော့ … ကြိုမလျှောက်မိလျှင် အချိန်တွေ နှောင့်နေးကုန်တယ် … ။
good news for retired people.
It is an honey drop from new government.Hope to get more and more drops.
ယခင်က မြန်မာငွေပျော့နေချိန်မှာ လစာ ၁ကျပ်တိုးရင် ကုန်ဈေးနှုန်းက ၂ကျပ် တိုး တတ်ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာတိုးတဲ့ လစာက သမင်မွေးရင်းကျားစားရင်းပါပဲ။
ဒါကြောင့် မြန်မာငွေမာနေချိန်မှာ လစာ တိုးဘို့အချိန်ကောင်းပါပဲ။ ဒီအချိန်မှာကုန်ဈေးနှုန်းက လစာတိုးတာကိုမှီအောင်လိုက်မတက်နိုင်ဟုမြင်ပါသည်။ဒီအခွင့်အရေးဟာ အမြဲတန်းမရနိုင်ပါ။
အခွန်ဆောင်ဖို့ စာရွက်တွေ လည်း ပလူပျံနေအောင် ထွက်ရှိလာကြောင်း